Ukunyamekelwa kweNtlanzi ngePhondo | Ngeentlanzi
El Iintlanzi zophondo lweentyatyambo Ayaziwa kakuhle kodwa yenye yezona ntlobo zixabisekileyo ngabo banayo, kuba iyi intlanzi ehlanganisiweyo Umxube wemizekelo eliqela ekhethiweyo esisisiqa sentloko yayo. Imvelaphi ayaziwa ngokwenene, nangona kukholelwa ukuba behla bevela eMalaysia.
Le ntlanzi ixabiswa kakhulu ngabo bonke Landela imithetho yeFeng Shui Kwaye abalandeli bathi ukuba inkulu inkulu entlokweni yayo, kokukhona ukuchuma, ithamsanqa kunye nokuphila ixesha elide kuya kunika umnini wentlanzi.
Ngokumalunga nokukhathalelwa kwayo, uPhondo lweentyatyambo yintlanzi ethi ihambelana ngokulula kakhulu nokusingqongileyo, nangona iyindalo enobundlobongela kwaye inendawo enkulu kakhulu, ke kuyacetyiswa ukuba ibe yodwa kwi-aquarium okanye iisampulu ezifanayo kunye ne-aquarium yemilinganiselo emikhulu ukuze ibe nendawo yayo yokuhlala. Inokufikelela kwi-40 cm kwaye amandla ayo anakho hambisa izinto zokuhombisa.
Njengokuba iyintlanzi enkulu, eyona nto ibalulekileyo kukugcina ukuhluza amanzi kwimeko efanelekileyo. Ukulungiswa kakuhle kwamanzi kuyacetyiswa ukuba utshintshe i-20% yamanzi rhoqo kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu. Inkqubo ye- I-pH kufuneka ibe phakathi kwe-7,5 kunye no-8, kodwa ingabi ngaphezulu kwe-8 Kuba ihlala emanzini ane-alkaline kancinci. Amaqondo obushushu kufuneka ajikeleze phakathi kwama-24 nama-27ºC.
Ukondla intlanzi yephondo leentyatyambo kulula, kuba kuthatha njalo ukutya kweflake kunye nokutya okuphilayo. Kuyacetyiswa ukuba unike isixa esincinci kabini okanye kathathu ngemini, utshintsha uhlobo lokutya.
Indoda inkulu kunowasetyhini, inayo intloko enkulu enkulu kunye nemibala eqaqambileyo. Abantu ababhinqileyo, ukongeza ekubeni bancinci, abanamibalabala kwaye abanaburhalarhume, banokungabinayo i-hump yangaphambili. Ukuzaliswa kwabo kukuvuthwa, abazali babakhathalele abantwana babo, kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuba kukho iimeko zokubulala indoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukunyamekela iintlanzi zePhondo